Vinavina Amin’ny Fampiasana Antserasera Ny Teny Ao Amin’ny Vondrom-piarahamonina Mayangna sy Miskito · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Novambra 2016 9:37 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Español
Ohatra tao amin'ny pejin'ny rakibolana amin'ny teny Anglisy, Espaniola sy Miskito.
Ity no lahatsoratra fahatelo momba ny tetikasa “Miskito sy Mayangna ato amin'ny aterineto”, nandresy nahazo vatsy tamin'ny vatsy bitika taona 2015 ho fanohanana ny hetsika fikatrohana nomerika ho an'ny teny teratany. Tontosaina ao Nikaragoà ny tetikasa ary mikasa hanamafy orina ny fiteny eo an-toerana miaraka amin'ny fandraisana anjara mavitriky ny tanora.
Taorian'ny fahavitan'ny dingana voalohan'ny tetikasa, namorona tantara an-tsary mitohy miaraka amin'ny lohahevitra toy ny hoe: “Miaina amin'ny SIDA”, “Fanavakavahana Ara-poko”, “Fandrahonana,” “Mikarakara ny marary”, “Luhpia Saura, Luhpia Pain “sy ny “Liwa Máirín” ireo mpianatra ao amin'ny Sekolin'ny Fitantanana. Nosoratana tamin'ny teny telo: Espaniola, Mayangna ary Miskito ireo iditra ireo.
Tamin'ny fiafaran'ny dingan'ity tetikasa ity, nihaona tamin'i Elizabeth McLean, hany mpahay ny haiteny Mayangna avy ao amin'ny Oniversite URACCAN ny mpampianatra, nanazava izy fa tsy niombon-kevitra tamin'ny famoahana antserasera ny votoaty amin'ny teny Mayangna ireo zokiolona Mayangna ao Siuna sy Bonanza–izay vondrom-piarahamonina Mayangna ao amin'ny Morontsiraka Karaiba Avaratra. Nanazava Ramatoa McLean fa tsy azo avoaka ivelan'ny vondrom-piarahamonina Mayangna ny lahatsary, tranonkala na Rakibolana amin'ny teny Mayangna. Araka izany, nampianarina hametraka tranonkala amin'ny teny Mayangna amin'ny endrika ivelan'ny aterineto ny mpianatra. Niteraka fahafahana ho an'ny mpianatra mba hiresaka ny fomba fijery momba ny fahasamihafan'ny teny eo amin'ny vondrom-piarahamonina vazimba teratany ao amin'ny morontsiraka Karaiba ao Nikaragoà sy any amin'ny firenena hafa izany toe-javatra izany.
Rehefa nangatahana izy ireo mba tsy hamoaka votoaty amin'ny teny Mayangna ao amin'ny aterineto, nanontany ireo mpianatra sasany teratany Miskito hoe: “Nahoana izahay no afaka mamoaka votoaty amin'ny teny Miskito fa tsy amin'ny teny Mayangna?”. Nilaza izy ireo fa te hizara ny fitenin'izy ireo amin'ny mpianatra Mayangna, kanefa toa tsy mifamaly izany fikasana izany. Tsy maintsy nanazava ny mpampianatra fa tsy zavatra tokana amin'ny zava-misy ao an-toerana akory ity toe-javatra ity, saingy izany no toe-tsaina matetika mahatonga ireo tranga isan-karazany. Nilaza koa ny mpampianatra fa manana fomba fijery mitovy ny vondrom-piarahamonina any amin'ny faritra maro hafa ary manan-jo hizara ny fahalalan'izy ireo ny vondrom-piarahamonina vazimba teratany. Taorian'izany adihevitra izany, tapaka ny hevitra fa azo avoaka tsy misy fepetra ny lahatsary, tranonkala sy rakibolana amin'ny teny Miskito, raha tsy azo aparitaka amin'ny aterineto na amin'ny sehatra ivelan'ny vondrom-piarahamonina Karaiba avaratra kosa ny fitaovana amin'ny teny Mayangna .
Rehefa avy nilaza fomba fijery manokana momba ny fanoratana, nanomana fihaonana tamin-dRamatoa McLean ny mpampianatra mba hamorona tahiry ho an'ny rakibolana nomerika amin'ny teny Espaniola, Miskito sy Mayangna. Samy liana tamin'ny fanohanana ny fanoratana amin'ireo teny teratany roa ireo na ny mpampianatra na Rtoa McLean, ary noho ny fiofanan'izy ireo momba ny haiteny no nahatonga izany. Nandika teny ho amin'ny teny ao an-toerana izy ireo tahaka ny hoe “teny, fanehoan-kevitra, dikany sy fehezanteny”. Taty aoriana, nameno ny tahiry tamin'ny iditr'izy ireo voalohany tao amin'ny rakibolana nomerika ny mpianatra. Tamin'ny fivoriana tatỳ aoriana, nanomana lesona hanazavàna ny mpianatra sasany mikasika ireo lafiny manokana sasany amin'ny firafitry ny teny, toy ny fahasamihafana eo amin'ny teny Miskito sy Mayangna ny mpampianatra sy Rtoa McLean, mifantoka voalohany indrindra amin'ny fanononana sy fananana ary ny fanamaroana izany.
Kilasy telo momba ny famoronana rakibolana amin'ny fiteny maro no notanterahina. Tamin'ny fotoam-pivoriana voalohany, nampiasaina ho hanaovana iditra voalohany ny taratasy fiasàna, ary maro ireo mpianatra nisafidy nanoratra fiarahabana toy ny hoe “naksa – manahoana” sy “nakisma – manao ahoana ianao”. Talohan’ izany, natoro hevitra ireo mpandray anjara mba hanaraka ny firafitry ny rakibolana efa nomanina, mikasika ireo teny, fanehoan-kevitra, dikany, ohatra fehezanteny, na koa sary. Raha vao afaka nahatakatra ny fomba fampiendrehana iditra ao amin'ny rakibolana ny mpianatra, dia nanomboka namokatra iditra maro kokoa izy ireo.
Nanapa-kevitra hanangana rakibolana roa amin'ny teny telo ny mpianatra, izay, ankoatra ny fiteny teratany ao an-toerana, nampiasaina ihany koa ny teny Anglisy sy Espaniola. Ny tetikady dia ny hamoronana lisitry ny teny amin'ny teny Miskito sy Mayangna, ary avy eo mandika azy ireo amin'ny teny Espaniola sy Anglisy. Ny tombontsoa amin'ny fampidirana teny roa lehibe indrindra dia avy amin'ny zava-misy fa amin'ny teny Anglisy sy Espaniola no fampianarana ny mpianatra any amin'ny oniversite.